Ndakaramba ndichiwedzera kuisa nerurimi mubeche rake apa ndichirumirira matinji - Masasi eHarare
DzeBonde Ndakaramba ndichiwedzera kuisa nerurimi mubeche rake apa ndichirumirira matinji
Kate ainge anaka nekushanda kwaaiyita to add to her pleasures, ndaitambisa rurimi rwangu mukati mebeche rake ndikanzwa achiita kuridza kamhere apa ndichinanzva juice dzese dzaibuda mubeche rake.
It was one of those usual Sundays makuseni ndikamutswa netuvana twaiyita noise vachitamba bhora panze and ndakatarisa nguva ndiwone it’s 8am, ndainge ndava mulast year of college. Sunday ndiro raive day randaizorora semunhu aigara nemabhuku all week and ndakakanganiswa nekutamba kwaiyita vapfanha ava bhora vachirova window rangu. Ndakamuka ndikawona foni yangu ine ma notifications from the class representative and mamwe from girlfriend yangu, Mpumi tainge tatova ne 3 years tichidanana after ndainge ndasangana naye through a mutual friend and ndaimuda zvokuti.
Like every couple tine ma ups and downs edu but chinonakidza pane zvese izvi is the make up part, kana tanetsana in a few hours tazvivharira mubedroom tinenge takanganwa everything.Tinodanana asi nyaya iyi takes our trust kune imwe level ine sister yaMpumi , Kate. Regai tidzokere kumakuseni aya eSunday after ndawona message ndakamufonera zvikanzi babe huya unditore tiyende ku Bela Bela somewhere kumakomo just to relax tisina cellphone reception. Ndakavhunduka nema plans ainge ari so sudden zvikanzi my sister Kate arikuuya nesu ndane time ndisati ndamuwona so she suggested we drive out of time, still ndakasara ndine mubvunzo ndikati kwakanaka here zvikanzi tichataura takuyenda ndikangoti horaiti babe ko ndainge ndisina hangu plans for anything the next 3 days kana chikoro ndainge ndiri off.
Ndakageza and 10 minutes ndainge ndapedza ndokutora Armani Code Deodorant Body Spray kuti ndinhuwirirewo ndokuisa futi ka after shave ke Gillette and then ndokupfeka smart casual ndokuudza vabereki vangu kuti ndakuyenda out with a college friend ndozodzoka magwana or the next day, vakangoti horaiti ko ndainge ndakura painge pasina reason yekuti No. Pasina 10 minutes ndainge ndasvika kumba kwana Mpumi vachibva vabuda vese nesister yake Kate, sister yake was 4 years older than musikana wangu but vainge vane body yakada kufanana and the height yavo was the same, vaitoita kunge ma twin sisters.Mpumi akandikisa padama paakapinda mumota and Kate gave me a hi-five tichibva tatanga rwendo rwedu ndichiridza have soft music yaifarirwa nemusikana wangu.
Ndakabvunza why the sudden plans zvikanzi aaaah since iwewe une basa and school plus inini doing my post graduate studies hatisi kuita spend time tese, It was true ndainge ndakutosuwa musikana wangu even nasisi vake Kate as tainge tiri close tese takadaro.It took us 4 hours and patakasvika ndainge ndaneta and we went straight kune this local lodge ndikati tirikuda room ine king size bed and a mattress, the two sisters vairara pabed inini ndorara pa mattress. Kubva kusvika kwatainge tayita ndaingowona vanhu vachizevezerana like pane zvainetsa, something surely bothered both of them even muroad ndaingowona a few tensed glances zviya zvekuti vanhu vane zvaitonetsa zveshuwa but ndainge ndisingade kubvunza zvakawanda.
Takayenda kunodya and Kate akasimuka first achiti aguta and aimhanya kunofano geza before tese tawuya, ndakasara ndakagara naMpumi ndokubva ndamuti chii chirikuitika as they both look tense zvikanzi aaah it’s a sensitive matter, ndakamuti babe I am all ears. Akatanga nekuti hanti unoziva kuti sisi vangu havana kumboita mukomana for the past 3 years she doesn’t trust varume anymore the only guy waanoita comfortable naye ndiwe. Ndakaita freeze for a moment ndisingazive kuti ndoita react sei, akayenderera mberi ndokubva ati neka voice kekukumbira “Babe, don’t get me wrong” unoziva kuti ndinokuda and ndinoda sisi vangu as well and zvirikundirwadza kuvawona vakadai as I know kuti chinhu chirikushota pavari kushaya mukomana.
Ndakaita kunge munhu arikufunga a bit, it’s not like handina kumbofunga about kukwira Kate, but kuita the real thing ndainge ndisingagone kuita something like that kumusikana wangu. Mpumi akatanga kuti babe taura something I get worried kana wakanyarara kudaro, ndakamuti it’s confusing but kana uchida kuti ndizviite I will try. Mpumi akandipa hug ndokubva ati I love you ndikati ndokudawo babe, Mpumi akatumira whatsapp kune sister yake ndokubva anditi chiyenda kuroom Kate akakumirira. Ndakamuti koiwe zvikanzi ndinogona kuitira this for sisi vangu but handikwanise kukuwona uchikwirana nemumwe musikana even if ari sister yangu.
kuisa nerurimi mubeche